बिचौलियाको घेरा तोडेर अघि बढनु आजको आवश्यकता - Pura Samachar
काठमाडौं, वैशाख ३ ।
पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तन पछि देशमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएको छ । यसका साथै हामी अहिले संघीयताको अभ्यासमा छौ । यो संघीयता देशका लागी अलि बढी महङ्गो भयो की भन्र्ने बहस पनि चलेको छ । हामीले देखिरहेका छौ की आज यो व्यवस्था आए पछि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मोटाउने र सर्वसाधारण जनता ऋण बोक्ने बाहेक अरु केही भएको छैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु समयको माग थियो । तर, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पछि जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो भने पाउन सकेका छैनन् । यो नै दुखद कुरा हो ।
नेपाली जनता आफैँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेर आएका हुन । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले देश र जनताका लागि जे जति सेवा गर्नुपर्ने थियो, त्यो भने गर्न सकेको छैन । कारण के हो भने नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक विवाद चरम रुपमा बढेर गएको छ । यसले देश र जनतालाई मात्र होइन, एमालेलाई समेत सङ्कटमा पारेको छ । नेकपा एमाले मिलेर जानु पर्नेमा विावाद गर्नु त्यति राम्रो कुरा होइन । आम जनता नेकपा एमालेको कार्यशैली देखेर निराश बनेका छन् । जनता निराश हुनु भनेको व्यवस्था माथिको नै खतरा हो । सकेसम्म जनतामा निराशा आउन दिनु हुँदैन । यो कुरा म बारम्वार भनिरहेको छु ।
आज देश बिचौलियाको घेराभित्र छ । यसरी देशको उन्नति, प्रगति हुँदैन । देश बनाउने सोच सवैमा हुनुपर्छ । आज देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यति सन्तोषजनक भइरहेको छैन । आफ्ना मान्छेलाई खुसी बनाउने बाहेक अरु केही देखिएको छैन । यसरी जनताको भलाई हुँदैन । जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यो । नेताहरूले मनपरी गर्न पाइदैन । जनताले बिश्वास गरेर नेतालाई चुनाव जिताउँछन । तर, चुनाव जिति सकेपछि जनतालाई बिर्सने बानी नेताहरूको छ । यसले गर्दा देशमा असन्तुष्टि बढ्नेगर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफना जनतालाई सन्तुष्टि हुने खालको काम गरेर देखाउनु पर्छ ।
त्यसो भयो भने मात्र लोकप्रियता बढन सक्छ । जनप्रतिनिधिहरू दलाल र बिचौलियाको घेरा तोडेर अघि बढनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र जनताले राहत पाउँछन । बेरोजगारलाई काम दिने भनियो, तर बेराजगारले काम पाएका छैनन् । अझै बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ । दलकै आसे पासे नाता गोता आफना कार्यकर्ता बाहेक अरुले रोजगार पाउँन धेरै मुस्किल छ नेपालामा । देशमा जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । सरकारी प्रशासन जनताको पहुँच बाहिर छ । सेवा कतै निःशुल्क छैन । अस्पतालहरू, शैक्षिक संस्थाहरू बिचौलिया र व्यापारीको घेरामा छन् । देशमा जे जति परिवर्तन भयो । त्यसको प्रतिफल जनताले पाउन सकेका छैनन् । संसारबाट कम्युनिष्ट पतन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कारण के हो ? नेतृत्वको व्यक्तिगत टकराव ।
कम्युनिष्टले बिकास गरेको देश भनेको चीन हो । बिश्वको तुलनामा चीन कसरी अघि बढ्यो । चीनमा अनुशासन, इमानदारिता र सुशासन छ । उद्योग र आर्थिक क्रान्ति नै भएको छ र पुँजीवादी अमेरिकासँग टक्कर गर्न सकेको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरू नामधारी भए, व्यवहार र नीति कम्युुनिस्ट भएन । नैतिकता, इमानको अभाव हुनु भनेको कम्युनिज्म हराउनु हो । जनताको टाउकोमा ऋण र महङ्गीको भार थपिएको छ । कम्युनिष्ट भनेको सर्वहारा बर्गका जनताको सेवा गर्ने पार्टी हो भनेर भनियो । तर, ब्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । त्यही बिश्वासमा जनता कम्युनिष्ट पार्टीमा लागे । अव कम्युनिष्टहरूले सोच्ने बेला आएको छ । नेपालका सवै कम्युनिष्ट घटकहरू मिलेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाइ देशमा बिकासको फडको मार्नुपर्ने देखिन्छ । फुटेर टुटेर कुनै कम्युनिष्ट पार्टीलाई फाइदा छैन ।
कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको सबैभन्दा बढी ‘आमा’ शब्द भएको गीत सार्वजनिक